Football Khabar » बार्सिलोना भर्सेस इएबार : पहिलो हाफमै मेस्सीले हाने ह्याट्रिक !
बार्सिलोना भर्सेस इएबार : पहिलो हाफमै मेस्सीले हाने ह्याट्रिक !
स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा अहिले लिगको २५औं राउन्डको खेलमा बार्सिलोना र एइबारको खेल जारी छ । दोस्रो स्थानको बार्सिलोना र १६औं स्थानको एइबारबीच बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा जारी खेलको पहिलो हाफमा घरेलु टोली बार्सिलोनाले ३–० को अग्रता लिएको छ ।
घरेलु दर्शकमाझ बार्सिलोनाका लागि कप्तान लिओनल मेस्सीले पहिलो हाफमै ह्याट्रिक गोल हानेका छन् । उनले खेलको १४औं मिनेटमा पहिलो गोल गरे । इभान राकिटिकको पासमा एइबारका ४ जना डिफेन्डरलाई चलाखीपूर्वक छलाउँदा मेस्सीले हलुका प्रहारमा निकै सुन्दर गोल गरेका थिए । त्यसपछि खेलको ३७औं र र ४०औं मिनेटमा मेस्सीले लगातार २ गोल गर्दै टिमलाई पहिलो हाफमा ३–० को अग्रता दिलाए ।
प्रकाशित मिति १० फाल्गुन २०७६, शनिबार २१:३७